Facebook ကျေးဇူးကြောင့် တလခန့် ပျောက်ဆုံးနေသောခွေး သခင်နှင့်ပြန်လည်ဆုံစည်း
ပို့စ်တင်ချိန် - 6/22/2014 07:55:00 AM
ကိုမင်းဇာနည်သည် ရန်ကုန်မြို့ တရုတ်တန်း၌ ညစာစားပြီးအိမ်အပြန် စဉ့်အိုးတန်းလမ်းအနီးတွင် ဂုတ်ကြိုးတန်း လန်းနှင့် မျက်စိလည်လမ်းမှာနေသယောင် ရှိသော ဘိုခွေးတကောင်ကို ကောက်ရခဲ့ သည်။
‘‘လမ်းဘေးမှာတွေ့နေကြခွေးမျိုး လည်းမဟုတ်၊ သခင်လည်း အနားမှာ မတွေ့လို့ ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီကောင် ကိုဆင်းခေါ်တာ။ ပထမ အကပ်မခံဘူး၊ အန္တရာယ်ပေးမယ့် လူတွေမဟုတ်မှန်း သိလို့လားမသိဘူး။ ခဏနေတော့ အနား ကပ်ခံတယ်’’ဟု ယင်းကပြောသည်။
အိမ်၌ကျွေးမွေးထားပြီး နောက် ရက်အနည်းငယ်အကြာ ပိုင်ရှင်အမှန်နှင့် ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ရန် သူ၏ကိုယ်ပိုင် Facebook မှ တဆင့် ‘‘ခွေးတကောင် ကောက်ရထားသည်”ဟု ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ကြေညာခဲ့ရာ လက်ဆင့်ကမ်းကြေညာ ပေးသူ ၁၅၀ ကျော်ရှိခဲ့သည်။ ရက်အတန် ငယ်ကြာသော်လည်း အကြောင်းမထူး သဖြင့် NewsWatch ဂျာနယ်အား အကူ အညီတောင်းခံ၍ ဇွန် ၁၅ ရက်နေ့တွင် NewsWatchဖေ့စ်ဘွခ်စာမျက်နှာမှ တဆင့် ထပ်မံကြေညာပေးခဲ့သည်။ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပိုင်ရှင်အမှန်နှင့်အဆက် အသွယ်ရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
NewsWatch ဖေ့စ်ဘွခ်ကကြေညာပြီးနောက် ပိုင်ရှင်မတွေ့သေးရင်လည်း မွေးပါရစေဆို ပြီးဝယ်မယ့်သူတွေက ဖုန်းတွေဆက်ကြ သေးတယ်၊ သူ့သခင်အစစ်နဲ့ ပြန်တွေ့စေ ချင်လို့ပါ။ ဖုန်းဝင်လာရင် ကျွန်တော်က ပျောက်ဆုံးတဲ့နေရာ အထီး၊ အမ စသဖြင့် မေးတယ်”ဟု ကိုမင်းဇာနည်ကဆိုသည်။
ခွေး၏မူလအမည်မှာ အာနိုးဖြစ်ပြီး ယာယီထိန်းသိမ်းစဉ်က ဂျက်စပဲရိုးဟူသော အမည်သစ်ရခဲ့သည်။
‘‘တခါမှ မပျောက်ဖူးပါဘူး၊ အဲဒီနေ့ က အိမ်ကအထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်အဒေါ် ဆိုငိုတယ်၊ ဖေ့စ်ဘွခ်ကကြော်ငြာကိုတွေ့ တာပါ၊ ပြန်ဆုံစည်းရတာ ဝမ်းလည်းသာ တယ်၊ ကျေးဇူးလဲတင်တယ်’’ဟု ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူ ကိုစိုးငြိမ်းဇော်က ပြောသည်။
ပုံ - Arnold နှင့် ကိုစိုးငြိမ်းဇော် ပြန်လည်ဆုံစည်းပြီးနောက် တွေ့ရစဉ်
၂၂ရက်၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် သတင်းထူးများ
ငါးဖမ်းစားတတ်လာတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံက ပင့်ကူတွေ
အစကပြန်စကြစို့ - ဟာသ
သမ္မတရုံးအကြံပေး ဦးအံ့မောင်ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း
ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့က သတင်းစာ ဂျာနယ်တိုက်တွေ ငွေကြေး အရှု...
ဖခင်တစ်ဦး၏ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ
ချစ်ကြစမ်းပါဗျာ . . . .ကျော်သူ
လူထုခေါင်းဆောင်အန်တီစု ခွေးတော့ သတိပြု
၈ပေစလောင်းမှ ကမ္ဘာ့ဖလား အခမဲ့ တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်မ...
သင် မထင်မှတ်ထားတဲ့ Vodka ကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်း...
ဘဲလေးကောင်နဲ့ ဆွေမျိုးသဖွယ် ချစ်ခင်စွာနေထိုင်တဲ့ ထ...
အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘယ်တော့မှ ဖွင့်...
ပါကစ္စတန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီး သစ်ပင...
ဦးစိုးဝင်းမှာ ယခင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ငြွေေ...
ဘယ်သူ့အတွက် အခွန်တော် ဆောင်နေကြတာလဲ (အပိုင်း(၁)
ဘီယာသောက်ပေးပါက အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်းကို လျော့ကျစေနိုင်
သက်သာပန်းတောင်းရွှေရင်အေးစေတီတော် အ၀င်လမ်းပိတ်ပြီး ...
ကျောက်တံခါးမြို့၌ ၂၂ ဘီးတွဲ ယာဉ်နှစ်စီး မီးလောင်မှု...
တရုတ်လမ်းသရဲ ၁၃ ဦးကို ရဲက ပစ်သတ်ဟု အစိုးရ ရုပ်သံ ဆို
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ ဇနီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ကျန်းကျန်...
စင်္ကာပူ ချန်ဂီလေဆိပ်အတွင်းမှ လည်ပတ်စရာ နေရာလေးများ
ရန်ကုန်ဘူတာကြီးမှ လမ်းဘေးစာသင်ဝိုင်း (ရုပ်သံ)
၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းများ အတွက် အဆင့်လ...
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို သတ်ခဲ့သည့် ကလေးရာဇဝတ်သားအား သေဒဏ...
မလေးရှားလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် လုပ်သားများအား ၂...
Looking and feeling your best during pregnancy ကို...
ဝန်ကြီးဦးဆန်းဆင့်ကို ဖမ်းဆီးကာ ရာထူးက အနားပေး၍ ဧရ...
ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံ၊ စာပေများနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးယူရန် အဓ...
ပုပ္ပားတောင်အနီးတွင် ဗုံးသီးဟောင်း နှစ်ရာကျော်တွေ့
အသားဖြူခရင်မ်သုံးရင်း အရေပြားတွင် အမဲစက်များ ထင်ကျ...
ကလေးငယ်တွေ ဈေးရောင်းခိုင်းသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ထို...
အွန်လိုင်းမှ ဆေးလိပ်သောက်သည့်ဓာတ်ပုံကိစ္စ ရွှေမှုံရတီ...
အိမ်မြေ၊ ဂိုဒေါင်၊ ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းမှု အခွန်နှစ် ထ...
Facebook ကျေးဇူးကြောင့် တလခန့် ပျောက်ဆုံးနေသောခွေး...
တရားမျှတခြင်းနဲ့ အမှန်တရားရဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဆာလောင...
အသက်၁၅ နှစ်အရွယ်မယားပါသမီးငယ်အားအကြိမ်ကြိမ် အဓမ္မပြ...
လှည်းတန်းဈေးအနီး ဓာတ်ကြိုးပြတ်ကျရာ နှစ်ဦးသေ၊ နှစ...
အမျိုးသမီးအလုပ်သမားနှစ်ဦးရှေ့တွင် ဝတ်လစ်စားလစ် ကြ...
ဂေါ့ဖ်လောကကို သိမ်းပိုက်စိုးမိုးနေတဲ့ ၁၁ နှစ်အရွယ်...
အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တ...